Angel Purple - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Tababbarka Ganacsiga ee Saaxibtinimo ee Asaasaqa
Waa maxay malaa'igtu Purple?
Hindisaha 'Purple Angel Initiative' wuxuu tababbaraa ganacsiyada iyo ururada ka jira beesheena si ay u aqoonsadaan, ula xiriiraan, una abuuraan jawi soo dhaweyn iyo badbaado leh dadka waallida qaba iyo daryeelayaashooda. Tani waxay ka caawineysaa ganacsiyada inay noqdaan “Dementia Friendly,” iyagoo ogeysiinaya bulshada inay meheradooda ganacsi tahay mid la heli karo oo ammaan u ah dadka waallida qaba.
Ma taqaanaa ganacsi ka faa'iideysan kara Tababarka Malaaqyada Purple? Ha ka wacaan ADRC lambarka (920) 448-4300.
Sidee ganacsi ama urur u noqdaa Purple Angel Trained?
Purple Angel waa tababar bilaash ah, 30 daqiiqo ah oo ka gudbaya aasaaska waallida iyo sidoo kale xeelado ku saabsan sida loola dhaqmo iyo la macaamilka qof waallida qaba. Waxa kale oo ku jira macluumaad gaar ah oo ganacsi oo loogu talagalay nooca adeegga la bixiyo. Si loo tixgeliyo "Purple Angel Trained," ganacsi ama urur waa inuu lahaadaa dhammaan maamulka oo ugu yaraan 50% shaqaaluhu ay maraan tababarka, iyadoo rajadu tahay inay gaarto qof walba.
Sideen ku ogaadaa meelaha loo yaqaan 'Purple Angel Trained'?
Ka raadi warqad albaabka iridda hore ku qoran "We are Dementia Friendly" oo leh sawirka Malabkeenna Casriga ah.
Fiiri Maabka Google-ka Purple Angel si aad u aragto dhammaan goobaha shaqaalaha lagu tababaray! Ma waxaad raadinaysaa liiska ganacsiyada oo dhan? Guji astaanta (sawirka hoose) ee geeska bidix ee sare ee khariidada si aad u aragto liiska dhammaan meheradaha tababaran ee Malaa'ig Purple!